घमण्डले ओरालो लाग्दै गायिका अञ्जु पन्त | My News Nepal
काठमाडौं । ‘तिमीले पराई ठानेपछि पराई हुन के भयो र...’ यो गीत अञ्जु पन्तको जीवनमा टर्निङ प्वाइन्ट ल्याएको गीतका रुपमा चिनिन्छ । तर, गायिका पन्तले काठमाडौंमा आयोजित आफ्नो एकल साँझ कार्यक्रममा यो गीतका संगीतकारलाई चिनिनन् । पन्त अहिलेकी व्यस्त गायिका हुन् । उनले त्यस गीतका संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठलाई नचिन्नु स्वभाविक पनि हुन सक्छ ।
तर, गायिका पन्तले आफ्नो एकल साँझ कार्यक्रममा सेलेक्ट गीतहरू गाएकी थिइन् । ती गीतहरू उनी आफैको रोजाइएका थिए । एकल साँझ गर्नु अगाडि ती गीतहरूमा पन्तले रिहर्सल गरेकी थिइन् । गीतको रचनाकारका बारेमा पन्तलाई थाहा थियो । रचनाकारको नाम पनि लिइन् तर, पन्तले संगीतकारको नाम अर्कै व्यक्तिको लिएकी थिइन् । यो प्रसंग यहाँ किन लिइएको हो भने गायिका पन्तले फेरि पनि यस्तै अभद्र र अप्रिय कार्य गरेकी छिन् । उनको कार्यले धेरै पुराना र वरिष्ठ गायक/गायिकाको मन दुःखाएको छ ।
गायिका पन्तले आफूलाई सम्मान गरेर बोल्नुपर्ने भन्दै फोनमा होस् वा प्रत्यक्ष भेटेका बेला धम्काउने गरेकी छिन् । उनको यो धम्कीको सिकार रचनाकार सुरेश घिमिरे पनि भएका छन् । रचनाकार घिमिरे वरिष्ठ गायक एवम् संगीतकार गोपाल योञ्जनसँग साथमा काम गरेका सर्जक हुन् । घिमिरेका धेरै गीतहरू अहिले पनि स्रोताको मनमा छाप छाड्न सफल छन् । गायिका पन्तको
व्यवहारबाट रचनाकार घिमिरे दिक्क भएका छन् । घिमिरेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस् लेखेर पन्तका बारेमा घुमाउरो भाषामा गुनासो गरेका छन् । ‘अञ्जु पन्तलाई सबै आदरणीय अग्रज गीतकार गायक अनि संगीतकारले हजुर तपाई भन्नु प-यो रे ! अञ्जुको माग । जस्तो सुने तेस्तै लेखे मैले’, रचनाकार घिमिरेले भनेका छन् । हुन त केही महिना अगाडि पनि गायिका पन्तले वरिष्ठ गायक नरेन्द्र प्यासीलाई पनि अभद्र व्यवहार गरेको गीत संगीतको क्षेत्रमा सुनिएको थियो ।
त्यस बेला धेरैले यो विषयलाई ध्यान दिएनन् । तर, गायक प्यासीले पन्तका बारेमा कसैलाई नभने पनि पन्तको अभद्र व्यवहार बाहिर आएरै छाड्यो । त्यति मात्रै होइन गायिका पन्तले नेपाली सेनाका उच्च अधिकृत समेत रहेका वरिष्ठ एरेञ्जर अमूल ढली कार्कीलाई पनि अभद्र व्यवहार गरेको भनेर हल्ला चलेको थियो । यस बारेमा एरेञ्जर अमूलले केही भनेका छैनन् ।
तर, गायिका पन्तले अमूलको पनि चित्त दुखाएकी छिन् । अमूललाई नजिकबाट चिनजानेका संगीतकार र गीतकारहरूले यसबारेमा बेलाबेला चर्चा गर्ने गरेका छन् । वरिष्ठ एरेञ्जर अमूललाई कसैको बारेमा कुरा गर्ने फुर्सद पनि छैन । तर, अमूल जस्ता व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन र सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का गायिका पन्तले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? भनेर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । पन्तलाई गीत संगीतको क्षत्रेमा उनका पूर्वपति मनोजराजले ल्याएका हुन् । मनोजराज हुँदैन थिए भने सायद गीत संगीतको क्षेत्रमा पन्त आउन सक्ने थिइनन् होला ।
गीत संगीतको क्षेत्रमा यसरी लागिन् कि गायिका पन्त आफ्नो घर परिवार छ भन्ने कुरै भुलिन् । समयमा घरमा नआउने, पतिसँग परामर्श नगर्ने, मदिरा सेवन गर्ने जस्ता दुव्र्यवहारबाट आजित भएका मनोजराजले अन्तिममा पन्तसँग डिभोर्स गर्न पुगेका थिए ।
मनोजराजले अहिले राम्रो छवि बनाएका छन् । उनलाई सबैले सम्मान गर्छन् । को सँग कसरी सम्बन्ध राख्ने ? कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने अनुशासन सिकेका छन् । छोरीको जन्म भइसकेपछि पनि मनोजराज पन्तसँग बस्नै सकेनन् । मनोजराजले अहिले दोस्रो विवाह गरेर सानका साथ घर गृहस्थी गरेका छन् ।
तर, पन्त भने दिनप्रति दिन विवादमा आइरहेकी छिन् । केही वर्ष अगाडि हिन्दू धर्मको भजन गाउँदिन भनेर संगीतकार र रचनाकारलाई झपारेर फिर्ता पठाइन् । उनले हिन्दू धर्मको भजन गाउँदिन भनेर अभिव्यक्ति दिएको भिडियो पनि सार्वजनिक भइसकेको छ । हिन्दू धर्म र भजन गाउँदिन भनेर क्रिश्चियनहरूको प्रवचनका बेला पन्तले दिएको भिडियो हामीसँग सुरक्षित छ ।
गायिका पन्त पछिल्लो समय वरिष्ठ सर्जक र संगीतकर्मीको मानमर्दनमा लागेको आरोप छ । उनी धेरै जसो क्रिश्चियन धर्मको प्रचारमा हिँड्ने गर्छिन् । ती प्रवचनहरूमा पन्तले हिन्दूधर्मको विरोध गर्ने गर्छिन् । उनको यो व्यवहारबाट धेरै शुभेच्छुकहरूको चित्त दुःखाएको छ । अब त झन् गायिका पन्तले वरिष्ठ रचनाकार र संगीतकारहरूलाई यसरी अपमान गर्न थालेपछि उनको चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । गायिका पन्तले ‘फल लागेको रुख ननिहुरेको कहाँ पो छ र ?’ भन्ने पुरानो उखानलाई भुल्नु हुँदैन । (यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिक )